Maxay tahay sababta ay Kamala Harris uga degtay Faransiiska? – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Maxay tahay sababta ay Kamala Harris uga degtay Faransiiska?
Madaxweyne kuxigeenka dalka maraykanka ayaa safar booqasho ku gaartay dalka Faransiiska,Harris waxa ay afarta maalmood ee soo socda ku qaadan doontaa Paris oo ay kala hadli doonto Madaxweyne Emmanuel Macron iyo mas’uuliyiin kale arrimo dhowr ah, oo ay ugu horreyso khilaafka ka dhashay heshiiskii muranka dhaliyay ee AUKUS kaas oo dhexmaray Mareykanka, Britain iyo Australia bishii Sebtembar, kaas oo ay raadin doonto inay sii waddo dayactirka, sida laga soo xigtay shabakada wararka ee France24.
AUKUS waa isbahaysi cusub oo u dhexeeya saddexda waddan kaas oo Australia ay ka iibsan doonto siddeed maraakiibta nooca quusa ee tamarta nukliyeerka casriga ah ee Maraykanka ama UK, sidaas darteed waxay meesha ka saaraysaa barnaamijkeeda mustaqbalka (FSP) oo Faransiiska maraakiibta naaftada. Heshiiska ayaa lagu dhawaaqay in dowladda Faransiiska ay aad uga naxday, taasoo aan haba yaraatee wax war ah laga hayn, iyadoo maalmo kaddib ay u yeertay safiirrada Faransiiska u fadhiya Washington iyo Canberra.
Shirkii G20 ee ka dhacay Rome dhamaadkii bishii hore, Madaxweyne Macron wuxuu la kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden si ay u dejiyaan xaaladda. Intii lagu guda jiray wadahadalkooda, Biden wuxuu ku tilmaamay tallaabada uu Mareykanku sameeyay “mid cakiran.” Heshiiska cusub waxa uu Faransiisku ku khasaaray lacag lagu qiyaasay €56 bilyan oo u dhiganta ($64.9 bilyan).
Muuse Biixi oo Xilkii ka qaaday Guddoomiye Ku-xigeenkii Gobolka Sool
Dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay Sarkaal la sheegay inuu ka tirsanaa Al-Shabaab